Hank on Burcad Badeeda TV waxaa sii kordhaya - macaamiisha si ay dhibaatadu saameysey - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · Hank on Burcad Badeeda TV waxaa sii kordhaya - macaamiisha si ay dhibaatadu saameysey
Hank on Burcad Badeeda TV waxaa sii kordhaya - macaamiisha si ay dhibaatadu saameyseyHank ku saabsan shirkad lagu tuhunsan yahay sharci-darro ah Malmö iibin channels TV oo ku saabsan in labada Sweden oo dibadda u bixi doonaa. Baadhitaanka ayaa hadda si firfircoon u doondooni doonaa shirkadda TV oo dheeraad ah, taasoo la micno ah in magdhow ay u badan tahay in ay kordhaan. wadarta waxaa hore u socda at 200 million.
Ilaa hadda, waxa ay leedahay saddex guuto TV - Diva Medya Hizmetleri Limited, Bein Media Group LLC iyo ART - Police ogeysiiyaa shirkadda Malmö. Labada shirkadood ee ugu horeeya u baahan tahay 200 milyan oo magdhow. ART ayaa weli ma ku cad tira kasta.
Oo sheegashada magdhow koraan laga yaabaa in aheyn. Shirkadda ayaa ku dhawaad 2,000 oo channels in qurbaannadooda iyo xeer-ilaalinta iyo booliska loo kuwa badan oo iyaga ka mid ah la xiriiraya doonaa.
- Ilaa hadda waxaa jira entries saddex kaliya, ayuu yiri xeer ilaaliyaha Henrik Rasmusson.
- Laakiin waxaan badanaa sidaas la sameeyo marka waxaa iska cad in ay jiraan waxaa laga yaabaa in codsadeyaalka kale waxaan u soo xiriiri doono.
Mid ka mid ah shirkadaha in ay ku kala duwan yahay news channel weyn Al Jazeera. Afhayeenka A halkaas ka ayaa hore u sheegay in SVT News Skåne in aadan haysan heshiis la shirkadda Malmö iyo in ay eegi doonaan more si dhow ula at waxa dhacay.
Maalintii oo dhan waa macaamiisha WALAACSANA iyo cadhooday kii iibsaday sanduuqyada ATN sii si aad u maqasho ka shaqaalahayaga tifaftirka su'aalo ku saabsan waxa ay qaban karaan iyo markii daayaa aad mar kale bilaabi karaa. Sida laga soo xigtay warbixin la xaqiijin in SVT News Skåne waxaa jira qorshe ay mar kale bilaabaysa warbaahinta Isniintii la channels la shati ama kan lacag la'aanta ah - waqtigan ka Holland.
Henrik Rasmusson aysan ka hadli doonin in waxa uu noqon lahaa ay suuragal tahay Gaarna sharci.
- Waxaan idhi hor in haddii ay jiraan heshiisyo iyo shatiyada, waxba ma aha si ay u joojiyaan baahinta, laakiinse anigu uma aan siin karaa kaadhka bilaashka ah, ayuu yidhi.
- Iyo in dhaqaaqin dibadda macnaheedu ma aha wax la sifaynayo sharci. Waxaa jira dhowr sababood oo la xiriira ka badan in dhacdooyinka ka dhaca Sweden. Tani waxay ku saabsan tahay shirkad Swedish in waxaa maamula dadka halkan ku nool. Waxaa laga yaabaa in ku filan in ay jirto in weli noqon arrin nidaamka garsoorka ee Sweden, xataa haddii aad guurto daayaa ka dibada.
Henrik Rasmusson ayaa sheegay in sharciga uu yahay mid la mid ah qaarada Yurub, iyo in haddii aadan haysan ogolaansho in ay wax soo diri ee Sweden ayaa laga yaabaa in aan la oggalaado in Holland. Intaa waxaa dheer, Oo wuxuu ku dhuuntaa fikradda ah channels "free" ama "free".
- Sharci ahaan, ma jirto wax in uu yahay lacag la'aan ah, ayuu yidhi.
- Xitaa haddii channel uusan wax kharash ah si loo eego, weli waa qof leh xuquuqda in ay sidaa daraadeed ma suubiyaan gudbin karaa. Milkiilaha channel uu leeyahay xuquuq gaar ah oo ku.
Taas macnaheedu waa in Shirkadda Malmö waa in ay muujiyaan in uu leeyahay ruqsad inay baahin dhammaan channels la heli karo in ay kala duwan, taas oo ku saabsan dhawr kun.
Sidee dheer baaritaan booliska this qaadan doonaa Henrik Rasmusson uma uu jawaabi karo, laakiin kiiska baaritaanka weyn.
- Waxaannu ku Qabanay muda badan oo wax ku server iyo kombiyuutarada in aynu u leeyihiin in ay dhex mari, ayuu yidhi.
- Waxaan sidoo kale u baahan tahay si aad u hesho xamili ah oo ku saabsan sida technology u shaqeeyo. Oo Mararka ugu daran ay qaataan waqti aad u dheer.
Farsamadan ayaa go'aan
Oo technology gabi ahaanba waa muhiim sababtoo ah haddii macaamiisha galeen dambiyo ama ma.
- In the case of signal a kaliya huleeshay, sidaa daraadeed waxa aan waa dembi, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
- Laakiin haddii ay tahay in la fahmo signalka sidaa daraadeed waxa uu noqon karaa mid meel ka duwan.
Laakiin qof kasta oo iibsaday sanduuq aan awoodin in ay ka shakisan tahay in dhan kuma hagaagsanayn?
- No, iyo in tallaabada xigta, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
- Waxaa laga yaabaa in ay ahayd ujeedada lahayn oo sidaas daraaddeed ma caddayn karaan denbiga. macaamiisha ayaa u dhaqmeen iimaanka wanaagsan, laakiin waa in aan ugu yaraan baaraan.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/harvan-kring-tv-piraterna-vaxer-sa-drabbas-kunderna11.11.2016. 20:53	Categories